Cutub ka mid ah ciidammadii Sheekh Maxamed Siciid Atam oo isku dhiibay dowladda Puntland | raascasayrmedia.com
← Hargeysa: Nin Jarmal ah oo la Xukumay
Xarrakatul Shabaab oo toogasho ku dishay mid ka mid ah askarta AMISOM ee ka socda Burundi →
January 13, 2011 · 7:55 pm
Cutub ka mid ah ciidammadii Sheekh Maxamed Siciid Atam oo isku dhiibay dowladda Puntland
Qaar ka mid ah ciidammadii Sheekh Maxamed Siciid Atam ee dowlada Puntland kula dagaalamay buuraleyda deegaanka Gal-Gala ee gobolka Bari, ayaa maanta isku soo dhiibay Puntland, iyagoo ka tanaasulay dagaaladdii ay wadeen.
Ciidamadan, isa soo dhiibay ayaa gaarayay 13-ruux, waxaana kulanka maanta ka dhacay gobolka ay ka sheegeen in ay taageeri doonaan nabadda Puntland,iyadoo ay goob joog ahaayeen qayb ka mid ah saarkiisha amniga Puntland.
Waxaa shirkaasi lagu dhaariyay dhamaan dhalinyaradii isa soo dhiibtay si aysan ugu laaban falkii ay kula dagaalameen ciidamada dowlada,waxaana ka mid ahaa sheekh Attam walaalkii ay isku hooyada yihiin,kaasi oo lagu magacaabo Xasan Baari.
Dhalinyarada ayaa la sheegay in markii hore ay isku dhiibeen ciidamada Puntland ee ku sugan Gal-Gala ,isla markaana ay sidaa ku suurtagashay in magaalada loo soo gudbiyo,isla markaana munaasabado lagu soo dhawaynayo loo qabto.
Ma jiro wax xukun ah oo lagu fuliyay raggaasi,waxaana dowladu ay sheegtay in cafis loo fidiyay ,maadaama ay ka tanaasuleen dagaaladii ay Puntland kaga soo horjeedeen.
Shirkii lagu soo dhawaynayay dhalinyaradan isa soo dhiibtay waxaa ka soo qayb galay masuuliyiin uu ka mid yahay gudoomiyaha gobolka Sheekh C/xaafid Cali Yuusuf iyo xubno sar sare oo ka tirsan saraakiisha amniga Puntland.
Warar ay HOL ka heshay saaraakiisha Puntland ayaa sheegaya in dhalinyaradan qaar ka mid ah dowlada lagu dari doono ,isla markaana ay qayb wayn ka noqon doonaan amni sugida gobolka Bari.
Saxaafada lama ogolaan in wax sawiro ah ay ka qaadato ragan horay uga tirsanaan jiray ciidamadii sheekh Attam,sababo la xiriira amaankooda oo dowladu ay u baqday.
Isa soo dhiibida xubnahan dowlada ka soo horjeeday ayaa ku soo beegmaysay ,iyadoo dhawaan Puntland ay sheegtay in degmada Gal-Gala laga hirgalin doono mashaariic xag hormarinta ah.